ITHALA LEENCWADI IPIRATES LIVULE IINCWADI ZEDIJITHALI - ILUNGELO LOKUSHICILELA
Intombazana Kumgangatho Wesithathu
Uluhlu Lweencwadi Ezingcwele
Ithala leencwadi iPirates livule iincwadi eziQeshiweyo zeDijithali, jonga abaPapashi
Njengee-eBooks kunye eBook abafundi baya besiba yinto eqhelekileyo, kuye kwakho ulindelo olukhulayo lokuba Iincwadi zesikhokelo zedijithali iya kuba yinto enkulu elandelayo kwiikholeji zeekholeji. Abanye abafundi benethemba lokubetha iincwadi zezifundo ezinexabiso eliphezulu ngokuqesha iinguqulelo zedijithali zeencwadi zezifundo, iqela elibizwa ngokuba yi IPirates yamathala eencwadi bathi banokuvula iincwadi eziqeshisayo kwaye bacwangcise ukuzihambisa kwi-intanethi simahla.
Nantsi indlela iskimu, esibizwa ngayo Ukuqesha iPirate , Iyasebenza. Umfundi, okanye iqela labafundi, uqeshisa ngencwadi yesuka kumhambisi we-eBook. Ezi zihlala zithengiswa ngamaxabiso esaphulelo, kwaye zifikeleleka kuphela ngexesha elicwangcisiweyo- isemester, ikota, njl.njl. Nje ukuba uthenge, umthengi wencwadi uthumela ulwazi lokukhuphela kumaThala eeNcwadi aMathala eencwadi athi abambe le ncwadi ayikhuphe kwi-DRM yayo. Iphinde yatshintshwa yenziwa iPDF yasimahla nesisigxina, iipirate zenza ukuba incwadi ifumaneke ngomjelo womthengi (wabathengi). Owu, naye nabani na owenzekayo uyayifuna.
Esi sesinye sezixhobo ababonelelwa ngazo liThala leeNcwadi lePirates ukwenza ukuba ezinye iincwadi zifumaneke simahla kwi-intanethi. Ukongeza kwilayibrari yabo esele ikhohlisayo yemilambo, bakhuphe nesicelo sefoto esizivelisa ngokuzenzekelayo kwaye senza ubungakanani kwakhona beefoto zeencwadi zesikhokelo. Iinjongo zabo kukujika nayiphi na ikhamera ibe sisikena sencwadi, kwaye babanga ukuba umfundi ozinikeleyo unokukrola incwadi enamaphepha angama-500 yonke kwisithuba seeyure ezimbini.
Ewe kunjalo, yintoni iPirates yeThala lencwadi ephuma kuyo nangaphandle kokophula umthetho. Njengoko kucatshulwe yi Ibhlog yeTorrentFreak , Iqela liyenza icace ukuba injongo yabo itorpedo inkqubo yeencwadi zezifundo abazibona zonakele ngokusika imali yomvakalisi. Kuyinyani ukuba ixabiso leencwadi zezifundo liphezulu ngokuhlekisayo kumfundi ophantsi, kwaye uninzi lwabafundi luyazifumana lutshixelwe kwiimeko apho zingenakukhetha ngaphandle kokuqokelela imali eninzi kwizicatshulwa ezifunekayo. Nangona kunjalo, ndinomdla wokwazi ukuba yintoni eya kuthatha indawo yenkqubo yangoku ukuba ibiya kuwa ngokwenene. Ukuprinta, ngapha koko, yinto ebiza kakhulu, kwaye ababhali kusafuneka bahlawulwe ngomsebenzi wabo. Kuyinyani, bekukho ungenelelo olwenziwe simahla, izicatshulwa ezivulekileyo kunye neencwadi zezifundo zasimahla, kodwa ababonanga ukwamkelwa ngokubanzi.
Ngenxa yokuba Uvoto luka-2010 lwafumanisa ukuba ii-eBooks zeekholeji zazingathandwa , oku akunakubeka uxinzelelo olukhulu kubavakalisi okwangoku. Ewe kunjalo, konke kunokutshintsha ngokukhawuleza.
(nge I-TorrentFreak )
Alycia Debnam Ukhathalelo
Ukuskena Komzimba Okungu-3D
sifuna ukutya iintsana
I-destiel canon iqinisekisile ixesha le-12
Iitrailer ezinyanisekileyo zihamba ebumnyameni
snl iSexual Harassment nawe
umkhweli wesitrato v iibhonasi zangaphambili zoku-odola